Goorma ayey Real Madrid si rasmi ah usoo bandhigi doontaa Eden Hazard? Waqti la isku raacay miyaa jira? – Gool FM
(Madrid) 31 Maajo 2019. Kooxda Real Madrid ayaan rajo ka qabin iney si rasmi ah usoo bandhigto saxiixooda xiga ee Eden Hazard ka hor 11-ka June, inkastoo laga yaabo in bilowga bisha lagu dhawaaqo inuu yahay xiddig ka tirsan kooxda boqortooyada.
Agaasimayaasha labada kooxood Marina Granovskaia iyo Jose Angel Sanchez ayaa si xushmad leh uga wada hadli doona arrinka, waxeyna kulmi doonaan maalmaha soo socda iyagoo dhameyn doona heshiiska labada dhinac kaas oo la filayo inuu noqdo mid lagu qanco.
Eden Hazard wuxuu muujiyay rabitaankiisa ku biirista Real Madrid, isbuucyo ka hor ayuuna saxaafadda si dadban ugu sheegay inuu ku wajahan yahay caasimada, kulankii Arsenal ayaana u muuqday kiisii ugu dambeeyay kooxda ka dhisan galbeedka London.
Sagaal (9) Malyan oo Yuuro ayuu haatan ka qaataa Blues fasalkii, halka Blues ay durba heshiiska badalkiisa dhameysay ka hor dhamaadka fasalkaan waana Christian Pulisic.